Thenga i-acetate powder (427-51-0) I-hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / Ukusetyenziswa kwamadoda / Ipropyone Acetate powder
SKU: 427-51-0. iindidi: Ukusetyenziswa kwamadoda, Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Cyproterone i-acetate powder (427-51-0), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-proprotheone i-acetate powder i-hormone yonyango kwaye yaziwa nangokuthi igama layo elibizwa ngeCyststat, Androcur, Andro-Diane, iCypone, iDianette Luhlobo lwesipilisi esibizwa ngokuba yi-androgen.
Iprotectone i-acetate powder ividiyo
I-proprotheone i-acetate powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-proprotheone i-acetate powder
I-molecular Formula: C24H29ClO4
Isisindo somzimba: 416.94
I-proprotheone i-acetate powder kumjikelezo womzimba
Amagama eKhemikhali: I-Cyprostat, Androcur, Andro-Diane, iCypone, uDianette
Amagama ebhanti: I-proprooneone i-acetate powder, i-Diane-35 powder, i-427-51-0
I-proprotheone i-acetate powder Ukusetyenziswa
Iprotectone i-acetate powder iyatholakala njengomlomo ngomlomo (tablet) kunye ne-injection long-injection. I-dose ephakanyisiweyo yee-tablet ze-acetate i-acetate ipilisi ye-acetate i-200 mg kwi-300 mg (i-4 kwiipilisi ze-6) imihla ngemihla, ihlukaniswe kwi-2 ukuya kuma-3 amanani kwaye ithathwa emva kokutya.
Kubantu abano-orchiectomy (ukususwa kwamathambo), umthamo ophantsi we-100 mg ukuya kwi-200 mg imihla ngemihla kwiisadi ezahlukileyo zicetyiswayo. I-dose ephakanyisiweyo yefom ye-long-acting ye-Cyproterone i-acetate powder eluhlaza (Androcur® Depot) yi-300 mg injected into muscle kanye ngeveki.
Izinto ezininzi zinokuchaphazela umthamo wamayeza afunwa ngumntu, njengobunzima bomzimba, ezinye iimeko zonyango kunye nezinye iyeza. Ukuba ugqirha wakho uphakamise i dose eyahlukileyo kulabo abalwe apha, musa ukutshintsha indlela osebenzisa ngayo amayeza ngaphandle kokubonisana nodokotela wakho.
I-proprotheone i-acetate powder ingabangela ubuthathaka nokukhathala xa uqala ukuyithatha. Emva kwenyanga yesithathu, umzimba wakho uya kuqhelisela amayeza kwaye le mphumo kufuneka ihliswe.
Kubalulekile ukuthatha le nyilisi ngokuchanekileyo njengoko kuchazwe ngugqirha wakho. Ukuba ulahlekelwa umthamo, thatha ngokukhawuleza. Ukuba liphantse ixesha lakho elizayo, weqa idosi ephosakeleyo kwaye uqhubeke neshedyuli yakho yexesha eliqhelekileyo. Musa ukuthatha i-dose ephindwe kabini ukwenzela umntu olahlekileyo. Ukuba awuqinisekanga ukuba wenzeni emva kokulahleka umthamo, qhagamshelana nogqirha wakho okanye ukhemistri ukuze ucebise.
Ukutywala utywala kufuneka kunqunywe ngelixa uthatha i-Cyproterone i-acetate powder eluhlaza ngoba inganciphisa ukusebenza kweyeza.
Gcina amayeza kwiqondo lokushisa, ukhusele ekukhanyeni nasekunyameni, kwaye ugcine ukufikelela kubantwana.
Musa ukulahla amayeza emanzini amdaka (umz. Ngaphantsi komquba okanye kwindlu yangasese) okanye kwidaka yamakhaya. Buza wakho umephemisti ukuba ulahla njani amayeza angasadingeki okanye aphelelwe yisikhathi.
Musa ukuthatha eli gama ukuba:
-iyingozi okanye iyanelisekile kwi-acetate powder okanye iiproducter zeli gciwane
-ba nesifo sesibindi esisebenzayo okanye sinciphise umsebenzi wesibindi
-ukunciphisa intliziyo yesifo
Isilumkiso kwi-Cyproterone i-acetate powder
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-Acrotate powder ye-Cyproterone, qiniseka ukuxelela ugqirha wakho kwanaluphi na uhlobo lwezonyango okanye ulwaphulo olunokuthi unakho, nawaphi na amayeza owathathayo, nokuba uyakhulelwa okanye uncelisa, kunye naziphi na iinkcukacha ezibalulekileyo ngempilo yakho. Ezi zinto zinokuchaphazela indlela oyifanele ukuyisebenzisa ngayo leyeza.
- Utywala: Ukusebenza kweCyproterone i-acetate powder eluhlaza ingancitshiswa xa utywala utywala. Kufuneka unciphise inani lotywala oselayo xa usebenzisa le mayeza.
Ukuxhatshazwa: I-proprooneone ye-acetate powder usetyenziswe ngezinye iziganeko kwenyuka kwenyango lokuguquka kwemizwelo, ngokukodwa ngokuqala kweyeza. Kufuneka uxelele ugqirha wakho ukuba unesixinzelelo kwixesha elidlulileyo.
-Izifo zesifo sephepha: I-acetate ye-acetate ipowder eluhlaza ingabangela ukuba igazi le-glucose likhule xa unesifo sikashukela.
-Isifo esithile: I-acrotate powder yiproproterone inokubangela ukuba amanzi aqokelele emzimbeni. Ukuba unesifo senhliziyo, qaphela xa usebenzisa le myeza kuba intliziyo yakho kufuneka isebenze nzima.
-Isifo sesifo: I-acrotate powtter eluhlaza ingabangela umonakalo kwisibindi. Ngokuqhelekileyo ikhula emva kweenyanga eziliqela unyango. Ugqirha wakho uya kujonga umsebenzi wakho wesibindi kunye nokuhlolwa kwegazi ukuba kukho naziphi iimpawu okanye iimpawu zesalonda somonakalo.
-Pregnancy: I-protectone powtate powder ayiyisebenzisi ngabasetyhini.
Ukutya okubalulekileyo: I-acetate ye-acetate ipowder eluhlaza ayisebenzisi ngabasetyhini.
-Izingane: I-acrotate powder ayiyicetyiswa ukuba isebenzise kubantwana
I-proprotheone i-acetate powder, I-acetate ityuwa ye-syntettic steroidal antiandrogen kunye nemisebenzi ebuthakathaka ye-progesational and antineoplastic. I-protectone i-acetate ipowder eluhlaza ibopha i-androgen receptor (AR), oko kukuthintela ukusebenzisiswa kwe-androgen-induced activation in tisses and targeting the growth of testosterone-sensitive cells cells. I-arhente iphinda isebenzise iipropati ze-agonist kwisakhiwo se-pituitary eyanciphisa i-hormone ye-luteinizing (LH), okuphumela ekunciphiseni kwe-testicular secretion kunye nama-serum testosterone. Utyando ngeCyproterone i-acetate powder yedwa kudala ukupheliswa ngokupheleleyo kwezinga le-testosterone. Hlola iimvavanyo zekliniki ezisetyenziswayo usebenzisa le nkonzo.
Isakhiwo semichiza ye-Cyproterone acetate eluhlaza powder acetae ngu:
-chloro-6-hydroxy-17 alpha methylene-1 alpha, 2 alpha pregnadiene-4,6 dione-3, i-20 i-acetate
I-proprotheone i-acetate ipowder eluhlaza
I-proprotheone i-acetate i-powder powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Cytterone powtate powder esuka kwi-AASraw
I-proprotheone i-acetate powder Recipes